Manchester City vs. Watford: FA Cup Final Prediction and Battles Key - TELES RELAY
HOME » SPORTS »Manchester City vs. Watford: Final Final Cup Cup neBattles Key
The 138e yekupedzisira ye FA Cup iyo makwikwi ekare emakwikwi munyika yose, inopesana neManchester All City, mutsigiri weLigeria League, kune avo vane simba kunze, Watford.
Izvozvo zvinogona kunge zvakakosha kune boka rePep Guardiola, asi pane chikonzero chekutenda kuti Javi Gracia angave ari kukonzera kushamisika kusingakanganwiki kungave kwakagadzirisa zvakakodzera kune chii chaiva mutambo inonakidza ino mwaka. Heino zvinhu zvose zvaunoda kuziva.
O: Wembley Stadium, London (90 000 simba)
PANDAKASANGANA: Mugovera; masikati HE, 17h UK ( kurarama paESPN + )
Backstory: Iyi ndiyo yechipiri yekupedzisira ye FA Cup ye Watford (makore emakore 35 apfuura, vakarasa 2-0 pamusoro pe Everton) uye nokuda kwezvakaitika kare, vakave kechikwata chechipiri, kunyange kana kubva pakupedzisira kukurudzirwa mu Premier League mu2015, ivo kazhinji vave vakasimba pakati petafura, vachipedzisa 11ème yemwaka.
Manchester City ndiyo inofanirwa kuti ndiyo yeboka rakanakisisa munyika. iye zvino uye, muchirevo cheChirungu, apedzisa nguva mbiri dzakanyanya kupfuura dzose munhoroondo yavo, achikunda 198 inokwanisika 228 nokukunda mbiri mbiri dzinotevedzana. Vakaramba vakachengetedza Carabao Cup gore rino uye vaizozadza nyika isati yavapo kare-kana vakakunda.
MUSIC ICON: Noel Gallagher weOasis achabatanidzwa muMitambo yeMaguta uye anotungamira mhemberero dzepamusoro muimba yekodhi muBrighton. Asi Elton John akanyengedza paari, kunyange zvazvo aifanira kupotsa mutsara kupa kambani muCopenhagen, Denmark. Ichokwadi, ave ave mutungamiri we Watford kaviri munguva ye16 makore. Mukuwedzera, zita rake ropakati ndiHercules, asi iro raGallagher iro rinowedzera kubhadhara Thomas.
The classics of @oasis vakanga vanyatsopinda nguva @ManCity yaipembererwa kumashure . ] @premierleague mazita 🎶 pic.twitter.com/gpA6sgFyx6
- ESPN UK (@ESPNUK) the 13 May 2019
NZIRA YOKUTANGA KWEMWBLEY: Iko FA Cup inogogodza, saka nhava nemikana zvinotora basa rinokosha, kunyanya sezvo rutsva rumwe-rwakakosha: iwe chete unotamba mutambo wokudzoka kana uri mutsara Nil kusvika kumativi mana. Guta rakakunda mitsara mitanhatu iri munzira kuenda kune yekupedzisira, asi yakatarisana chete neMidy Premier League clubs (Burnley naBrighton) vari munzira. Watford akatarisana nemakwikwi matatu ekumhanya-shanya (Crystal Palace, Newcastle United naWolverhampton Wanderers) uye kamwe chete vakamboita kumba.
ZVINHU ZVINOKOSHA PAMUGARA : Watford aifanira kutora zvinangwa zviviri. mune zvinyorwa zve kukunda 3-2 Wolve munguva dzinopfuura . Mutaundi weManchester yakazviwana iwo 2-0 pasi nemaminitsi e21 kuti akakodzera nzvimbo yechipiri ye Swansea, iyo ingadai yakave chimwe chezvinhu zvinotyisa zvemukaka. Asi vakarwa uye vakatora kukunda maminitsi maviri kubva pakuguma, kuisa chisimbiso kukunda kwe3-2 .
CHINHU CHINHU: Abdoulaye Doucoure et Etienne Capoue kurwisa hama dzaSilva
Zvakanaka, ivo havasi hama, ivo vanongova nemakemikari uye kunzwisisa kunoratidza hukama hweropa kana kuti mamwe maonero. Kana Guta, sezvinotarisirwa, rinotakura huwandu hwenhaka uye Watford inomutsa mabheji, ichava kusvika Bernardo Silva et David Silva (kana zvichida ] Ilkay Gundogan Kevin De Bruyne ou Phil Foden - hongu, Guta rine zvombo zvakawanda) kuti zviparadze. Capoue neDoucoure vanoumba mumwe wePremier League midfielder duos, kupa fisikiti, kuteerera uye mazano. Kana Guta risingagoni kuvayambuka, vachafanira kuwana nzira yakavapoteredza.
- Ogden: Rwendo rwaDeeney kubva mujeri kuenda kuC FA Cup yekupedzisira
- United inoda City kuti iwane FA Cup kuti irege kudzivisa
- Ndiani anokodzera kutumidzwa kweEurope Champion?
- ESPN +: Wembley Road pakati pe Man City na Watford
Haasi nguva dzose achitanga, asi ane unhu husina maturo uye chiso nechiso kukwanisa kugadzira chimwe chinhu kubva pakutanga uye, zvechokwadi, ndizvo zvaanoshandisa mumutambo uyu wechidiki uyo wakaunza Watford pano.
X FACTOR, MUGA WEMAKCHESTER: Leroy Sane
Ichokwadi kuti iwe unogona kukanganisa mugwagwa weGermany pamusana wekupedzisira mumitambo kurwisana nevati vakaneta nemeso egirazi kune simba guru. Anopinda nechokudenga nebhora zvisinganzwisisiki pane izvi.
MWOYO NEMUSIMA, WATFORD: Troy Deeney
Ino ndiyo nguva yepfumbamwe yekurwisana iyi mukirabhu. gondohwe remushushi asina kusiya chinhu pasi uye uyo akashanda pasi pevatungamiri vakasiyana-siyana ve11. Haasi nguva dzose dzakanakisisa kutarisa, asi kushanda kwake uye nekuregererwa kwenhoroondo yake - akashandisa nguva mujeri yekutora chikamu muhondo paaiva nemakore 22 uye akazopfuura zvakaenzana nekuongorora kweGED (kukura kwe dzidzo yakawanda) - ita kuti inakidze
Gerard Deulofeu naTroy Deeney vachange vari pasi pekutarisira kweWatford kutarisa kutanga kweFIFA Cup final. Charlotte Wilson / Offside / Getty Images
MWOYO NOMUSIMI, Guta: Raheem Sterling
Iri bhuku ibhuku rezvekuregererwa, kunyange rakanyanya kuchinjwa nenzira iyo yakanzwisiswa kupfuura iyo. akaita. Ane utsinye uye asina kukodzera wacky sechinhu chakanaka uye chinonyadzisa paaifamba kubva kuLiverpool kuenda kuManchester City, iye zvino anonamatwa muEngland uye akazvisimbisa semunhu anonyatsoziva nezvemagariro evanhu. Pamakore e24, nyeredzi yake inokwira zvakare ...
ZUVA RAKUVA, WATFORD: Heurelho Gomes
Iye ari nemakore 38, haasisiri nguva dzose uye anofanirwa kusiya kubva pakuguma kwemwaka, kunyange zvazvo Watford akakumbira kuti agare gore rinopfuura. Asi iye anonyanya kuzivikanwa pachikwata uye kumba cheerleader, ingave anotanga kana kwete. Zvechokwadi mumwe wevakanaka vakomana.
NENGUVA YAKUVA, MANCHESTER CITY: Vincent Kompany
Akange ari pano kwemakore gumi nerimwe, vasati vemuEmirati uye kushandurwa kweManchester City kuve boka guru. Aimbova mumwe wevanyori vezvidziviriro munyika, akave achideredzwa nekukuvadzwa pamusoro pemakore matatu apfuura, asi akadzoka musimba munguva ino nemitambo yevintage (uye chinangwa chisingaoneki chinangwa neLeicester City). Anotaura, akajeka uye mutungamiriri wechisikigo, apo (kana?) Achaenda, anogona kunyora tikiti yake sezvaanoona zvakakodzera.
CHII CHINOKUDZIDZA WATFORD Kuzviisa pachake mumuviri pakati pemunda nebasa re Doucoure-Capoue. Kana, sezvinotarisirwa, Gracia anosarudza mbiri mberi, edzai kuti inopinda kumashure kweGuta reGuta kana ivo vasati vagova nebhola uye vanovhiringidza zvakanyanya sezvinobvira kugadzirisa. Tora uchishandisa hukuru hunoshandiswa pazvidimbu zvetray.
CHII CHICHAITI CHINOFANIRA KUTI KUTI UYE: Rega tarenda ravo rakanaka uye kuziva-sei zvivhenekera uye vauise kwavari mukukunda. Usakanganiswa kana zvinangwa zvichitora nguva inouya. Drop Sterling muzvikamu zvepamusoro kuti uite zvimwe zvinokanganisa kana Watford ichidzorera nzvimbo yechirango.
KUFUNGWA: Manchester City inokunda pfupa re 3-1
Iko kusanganiswa kwedu uye simba remoto. Watford inogona kunge yakanyanyisa kutamba, saka kana City Chief Guardiola asingadi kuwana mhinduro, angafanira kuwana imwe sarudzo. Nenzira yekuti, ane mhando dzakasiyana siyana, kana ari pabhenji kana kungoshandura vatambi.
Nyaya iyi yakatanga kutanga (muChirungu) http://espn.com/soccer/english-fa-cup/0/blog/post/3855291/manchester-city-vs-watford-fa-cup-final-predictions-and-key-battles